शान्ति र सम्मृद्धिको वर्ष बनोस्, २०७६!::Nepali News Portal from Nepal
शान्ति र सम्मृद्धिको वर्ष बनोस्, २०७६!
आजबाट नेपालीहरुको पात्रो फेरिएको छ । विक्रमादित्यले प्रयोगमा ल्याएको सम्बत अनुसार हामी नयाँवर्ष २०७६ सालमा प्रवेश गरेका छौँ । विक्रम सम्बत सनातन धर्माबलम्वीको पात्रोमा आधारित सम्वत् हो । विक्रम सम्बत सूर्यसँग सम्बन्धित छ भने यसले ग्रह र नक्षत्रहरुको चालसँग पनि सामजश्यता राख्छ । इश्वी संम्बत अर्थात गेग्रोरियन पात्रोभन्दा यो ५६ वर्ष ८ महिना १५ दिन अगाडि रहेको छ । विक्रमादित्यको जन्म भारतको उज्जैनमा भयो कि नेपालमा भन्नेबारे विद्धानहरुको राय बाझिन्छ । तर, योगी नरहरिनाथले विक्रमादित्य राजाको अस्तित्व भारतमा नभएको र उनी नेपालकै राजा थिए भन्ने तर्कलाई मान्ने हो भने यो नेपालको मौलिक सम्वत हो । विक्रम सम्वतभन्दा पहिला नेपालमा शक सम्वत प्रयोगमा थियो। यसैगरी नेपाल सम्बत पनि । विक्रम सम्वत् शक सम्वतभन्दा १ सय ३५ र नेपाल सम्वतभन्दा ९३६ वर्ष जेठो रहेको छ । नेपालमा चन्द्र समसेरको पालादेखि विक्रम सम्बतलाई आधिकारिक सरकारी सम्वतको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको हो । यद्यपी,त्योभन्दा अगाडिका बिभिन्न शिलालेख र दस्ताबेजहरुमा पनि विक्रम सम्बतको प्रयोग भएको पाइन्छ ।
भारतमा अंग्रेजको आवागमनसँगै पूर्वीय संस्कृतिमा आधारित विक्रम सम्बत हटाइयो । भला, भारतका हिन्दुहरु आफ्नो धार्मिक कार्यमा विक्रम सम्बतकै प्रयोग गर्छन् । चीनले पनि आफ्नो मौलिकताभन्दा अंग्रेजी सम्बतलाई नै प्रयोग गर्छ । नेपालले भने आफ्नो संस्कृतिसँग जोडिएको विक्रम सम्बतलाई निरन्तरता दिएको छ । यो खुसीको कुरा हो ।
वर्ष फेरिनु नयाँ कुरा होइन । पात्रोसँगै हाम्रा लक्ष्य र उदेश्यहरु निर्देशित हुनुपर्छ । किनकि, देशका सबै क्षेत्रका गतिबिधिहरु पात्रो अनुसार नै चल्छन् । पात्रो अनुसार बजेट बन्छ । पात्रो अनुसार योजना बन्छन् र पात्रो अनुसार नै त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ । राज्य र व्यक्तिको जीवनलाई जोड्ने काम पनि गर्छ, पात्रोले । मानिसका जीवनमा सोचेजस्तो सधैँ हुँदैन । कर्म गर्दा पनि कहिलेकाहिँ प्राप्ति दिँदैन । तर जीवनमा कर्म गर्न भने छाड्नु हुँदैन । त्यसैगरी नयाँवर्षमा प्रवेश गर्नु भनेको अघिल्लो वर्षको समीक्षा गर्नु पनि हो । गल्तीबाट पाठ सिक्दै जीवनको लक्ष्य निर्धारणले सफलता प्राप्त हुन्छ । गल्ती नदोहो¥याउने र रचनात्मक कामतर्फ प्रेरित गर्ने अर्थमा पनि नयाँवर्षलाई लिनुपर्छ । गलत आनीबानी छाड्दै उर्जाशील जीवन जिउने उत्प्रेरणा आफैभित्र सृजना गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रको राजनीतिमा बितेको वर्ष मध्यमस्तरको रह्यो । शक्तिशाली सरकार बने पनि जनताका अपेक्षाहरु पूरा भएनन् । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नहरु कानूनको दायरामा आउन सकेनन् । केही ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुले पनि देश सुशासन नभएको प्रमाणित ग¥यो । बेरुजु, भ्रष्टाचार, महंगीले जनता पिल्सिए । राष्ट्रको जीवनमा घटित यी घटनाहरुले जनतामा निरासा पैदा गराएको छ । अर्कोतर्फ द्धन्द्धबाट बाहिर आएको देशमा फेरि कहिँकतै द्धन्द्ध बल्झने त हैन भन्ने आशंकाको बादल पनि मडारिएको छ । यी राम्रा संकेतहरु हैनन् । बलशाली सरकारलाई यो वा त्यो बहानामा जनअपेक्षा कुल्चने छुट हुँदैन । आउने वर्षमा सरकारले जनतका चाहना पूरा गरोस्, देश सुशासनतर्फ अगाडि बढेस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ । राष्ट्रको जीवनमा आउने प्रगतिले निश्चय पनि जनतामा समेत खुसी ल्याउँछ । नारामा सम्मृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जपेरमात्रै केही हुँदैन । नयाँवर्ष सबै नेपालीको लागि शान्ति, सम्मृद्धि र सुखको वर्ष बनोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना !